IRGA: SHARAXAAD FAAHFAAHSAN, XEERARKA GUUD EE BEERASHADA IYO DARYEELKA - BEERTA
Waxay badanaaba dhacdaa in dhirta furfuran ee u baahan daryeel iyo daryeel joogto ah la siiyo fiiro dheeraad ah, oo aan qabyo ahayn waxaa lagu daaweeyaa halkii si taxadar la'aan ah. Waa dhaqankaas oo kale waa irga. Sida caadiga ah waxaa laga arki karaa meel ku taal bannaanka xaafada. Laakiin cid kastaa way ogyihiin in irga uu yahay warshad qurux badan, oo lagu qiimeeyo dalal badan. Bishii Maajo, waxay uqalmaysaa isha oo la socota ubaxyo qurxoon, oo aad u la mid ah ubaxyada ubaxyada, iyo bisha Sebtembar, dharka Irga ee taajka casaan iyo jaalaha ah. Maqaalkani waxaad baran doontaa waxyaabo badan oo xiiso leh oo ku saabsan irbaha geed: beerashada iyo daryeelka, dhalashada, beerashada, iyo xaqiiqooyin kale oo faa'iido leh.
Waa muhiim! Xaydhka acid ee digaagga waa yar yihiin, si ay u badbaadin karaan dadka ay ku jirto kiimiko sare.
Irga: sharaxaadda dhirta
Irga waxay leedahay magacyo badan, sidaas darteed sharaxaadiisu waa mid xiiso leh. England gudaheeda, geedkan waxaa loo yaqaan shadbush, taas oo macneheedu yahay "geedkii hooska"; juneberry - berrinka juun ama adeega caleen - miro yar leh. Magaca currant-geedka (qorfe) ayaa la siiyey Irga sababta oo ah waxay la mid tahay canab yar. Russia, irgu waxaa lagu magacaabaa xannaaneyn ama sheyga. Waqooyiga Ameerika - saskatoon (saskatoon). Magaca Provencal ee dhirta this waa amelanche, taas oo macnaheedu yahay "keenaan malab".
Irga genus waxaa iska leh qoyska Rosaceae. Waxaa ka mid ah 18 nooc (sida laga soo xigtay ilaha - 25), intooda badani waxay ku koraan Waqooyiga Ameerika. Irga waxaa inta badan laga helaa geesaha kaynta, dabaqyada qorraxda leh ee qorraxda, ee ku yaalla glades. Meelaha furan ee Ruushka, badi irka-leaved koraya, kuwaas oo dalkooda waxaa loo arkaa in ay yihiin Caucasus iyo Crimean ah. In Ukraine, oo ku saabsan 10 nooc oo warshad this waxaa lagu yaqaan: irga, irga Canadian, irga gaduudan iyo kuwa kale. Inta badan waxay ku koraan duurka. Dhaqanku wuxuu ku fidaa shimbiraha, sidaas awgeed irgu badanaa waxaa laga heli karaa geeska kaynta.
Warshadu kama baqeyso abaarta iyo dabaysha, waxay dareemeysaa weynaan ciid ah, marka laga reebo aagagga caanka ah, ma cabsanaayo dhaxan daran. Dhaqanka Irriga ayaa si fudud loo sharxayaa: xididdada warshadu waxay ka dhigtaa laba mitir oo qotodheer iyo kala-duwanaan ah laba illaa iyo labaatan mitir. Sababtan awgeed, irga ma cabsanayo hooska, hawada wasakhaysan, ma baqdo cudurada iyo cayayaanka, dhaqanka si dhakhso ah u koraan oo u dulqaato manjooyin. Qoyskooda, irga waa muddo dheer - qoyaan badan oo gaaraya 70 sano ama ka badan. Iyo ugu muhiimsan, dhirta this waa warshad malab ah.
Laakiin haddii aad rabto irga si ay u koraan goobaha, ma aha oo kaliya beerto iyo arooska waa muhiim, laakiin sidoo kale aqoonta ku saabsan saameynaha dhinaca geedka this. Way yar yihiin. Irgie-ga xayeysiisku wuxuu leeyahay korriin xidid adag, sidaas darteed waa in laga saaraa wakhti kasta. Iyo sidoo kale waa mid aan loo baahnayn in la beerto irgu u dhow goobta baabuurta la dhigto - baabuurta midabada iftiinka ah waxaa laga yaabaa inay ku dhacdo lebbaado kuwaas oo ka tagi doona berry dhaca.
Ma taqaanaa? Midhaha xaydhku waa mid aad u dhadhan, oo ay tahay inay si macno leh u "garaacaan" goosashada - shimbiraha ayaa ka soo baxaya miro dhirta leh xawaaraha iftiinka.
Diyaarinta ciidda iyo xulashada goobta ee ku xoortay geedihii
Warshadu waxay gabi ahaanba aan qabin xaalad dibadeed. Laakiin tan iyo irga waa geed caleemo miro leh, wuxuu jecel yahay qorraxda aan tooska ahayn. Dalagga ugu fiican ayaa la goyn karaa haddii irga lagu beeray ciidda caanaha ah ee sodium-podzolic iyo loamy bacrin ah.
Irga ma cabsanayo hooska iyo la'aanta qoyaan, sidaas darteed waxay si ammaan ah u siin kartaa dhulka xayndaabka dusheeda. Irga waxaa lagu beeray si la mid ah sida duurka kale ee berry, sida currants ama gooseberries. Geedo waa la yareeyey dhulka dayrta ama guga 8 cm qoto dheer ka hor intaanay korin. Tani waxaa loo sameeyaa si ay u koraan tiro badan oo caleemaha asalka ah. Doorashada ugu wanaagsan ee habboon iyo quruxda leh waa in lagu beero irgu sida dusha sare.
Sida loo aaso irgu
Waxaa lagula talinayaa in lagu beero 1-3 geedo cagaar ah beerta. Qeyb walba waxay u baahan tahay inaad qaadato 16m² oo ah ciidda loamy ee bacriminta ah iyo 9m² oo ah dhoobo boodh ah. Wixii geedo isku diyaariyaan godadka 80 cm ballaaran iyo 40 cm qoto dheer. Ka dib markii laga beerto, ay duurka yihiin la waraabiyo, humus ama peat waxaa la saaray dusha ciidda, waa suurad wacan in la gaabiyo qaybta dhulka ee baadiyaha si 10 cm si ay 4-5 horumariyo burooyinkeeda ka sii sareeya heerka ciidda. Ku saabsan waxa ay yihiin burooyinka ee irgi, kuwaas oo Bloom dabayaaqadii April, ayaa u sheegi doonaa sawirkan.
Ma taqaanaa? Irga waa mid aan la qabin in shuruudaha dabiiciga ah uu midho dhadhan fiican leh.
Miyaan u baahanahay in aan biyo dejiyo?
Xaabsade irgi si fiican u qaadan xidid ka dib markii laga beerto iyo uma baahnid daryeel gaar ah, waxay koraan iyo midho u dhali. Laakiin ayadoo si joogto ah iyo waraabinta waraabiyo tirada tirada miraha ayaa si muuqata u kordha. Carruurta qoyan waxay ilaalinayaan xididada si wanaagsan waxayna u oggolaadaan geedku in uu had iyo jeer noqdo mid caafimaad qaba oo xoog leh.
Xilliga xagaaga, irgiu waxaa lagu quudiyaa iskubaax, oo ka kooban biyo iyo amooniyam oo heerkul ah 50 g halkii geed ama 5 l oo ah 10% xalal shimbir ah. Waxaa ugu fiican in la quudiyo geedka fiidkii ka dib waraabinta culus ama roobka.
Sida loo gooyo warshad
Waxaa ugu wanaagsan in la abuuro irgu sida foomka ah baadiyaha multi-dogob ka soo caleemaha aasaasiga awood leh, iyo in laga saaro kuwa daciif ah.
Geediga ugu horeeya ee geed ayaa la fuliyaa inta lagu guda jiro beeritaanka, on a geedka dhalinyarada ah oo aan ka badan lix buro caafimaad leh ayaa laga tagay. Ka dibna iyaga ayaa koraya. Ilaa da'da saddex jirka ah, dhammaan caleemaha waa in la xafidaa, ka dibna aan ka badnayn saddex ka mid ah kordhinta sanadlaha ah waa in laga tagaa. Laamood oo xoog leh oo caafimaad qaba hubi inaad badbaadiso. Sanad walba qashinka waa inay ahaataa ilaa 15 laamood oo ka yimaada koritaano kala duwan. Haddii koritaankooda ay ka sii daraan, markaa hal mar 4 sano gudahood waxay ku haboon tahay inaad sameysid manjooyin cusub. Hase yeeshee qaabsocodka noocan oo kale ah ayaa la samayn karaa oo kaliya duurka kuwaas oo horey u gaaray da'da toban.
Si aad uga dhigto mid kuu habboon inaad soo goosato, gooyaa laamaha si aad u hesho height. Ka dib markii manjooyin, irga si madax bannaan u koraan caleemaha xididka.
Noocyada daryeelka ee sanadaha ugu horeeya nolosha
Sannadka ugu horeeya ka dib markii la beero, galley si fiican u koraan, beerashada iyo daryeelka ayaa la sameeyaa iyada oo aan wax gaar ah lahayn. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee loo baahan yahay waa guga horraantii, ka hor inta ay burooyinkeeda ku dhufteen oo la eryey, dhammaan laamaha sii kordhaya ee baahida geedeed ee la jarayo, la yareeyo dhererkooda rubuc.
Gooyo iyo sameynta baadiyaha qaangaarka ah
Beedalad si habboon loo sameeyay oo loo yaqaan 'irgi' ayaa soo saara marar badan oo badan oo ka sameysan dhir aan la jarin oo qaabeeya. Haddii irgu la koro sida quruxda quruxda leh ee beerta, taajkeeda sidoo kale waxay u baahan tahay "timo jilicsan". Inta badan dhammaantood, nidaamkani waxaa loo baahan yahay laamo waaweyn. Waa muhiim in la gooyo warshad si haboon si aan u samayn waxyeello ka badan ta wanaagsan.
Hawlaha ugu muhiimsan waa in dib loo noolaado irgu. Waxaa jira laba nooc oo daaweyn ah: khafiifinta iyo yaraynta. Marka khafiifinta, taajirrada daciifka ah, bukaanka iyo qoto-dheeraadka ah ee laamaha ayaa la gooyaa gebi ahaanba. Khafiifinta waa in la sameeyaa sanad kasta. Inta lagu jiro yaraanta, caarada oo kaliya caleemaha ayaa la saaraa, iyo dhowr koofi ayaa weli ku habboon. Sidaa darteed, waxaa suurtagal ah in la bedelo muuqaalka taajka, waxay noqonaysaa mid cufan oo ballaaran sababtoo ah caleemaha yar yar.
Haddii aad rabto inaad buuxiso meel bannaan oo ku taal bartamaha taajka, waxaad u baahan tahay inaad ka saarto baxsiga, oo kaliya kelyaha daran, kaas oo lagu faray gudaha geedkan. Later, caleemaha toosan ayaa kori doona burooyinkan. Gaaban irgu dhowr jeer: inta lagu jiro daaweynta ugu horeysa, inta lagu gudajiro nidaamka samaynta taajka yar, iyo sidoo kale marka uu dhirta si xoog leh u baxo oo beergooysigu aanay gacmo lahayn.
Waa muhiim! Miraha berry waxaa ku jira fiitamiin B, ascorbic acid, anthocyanins, pectin iyo beta-sitosterol, taas oo ah antagoniste wanaagsan ee kolesteroolka.
Lafaatiir ka wayn lix sano ayaa laga saaraa iyada oo aan qoslin. Waxay si dhakhso ah u beddeli doonaan caleemaha basal awood leh. Wixii xajka koray ee loogu talagalay ujeedooyinka loo qurxiyo, taajkii waxaa loo sameeyay aasaas hawleed. Tusaale ahaan, haddii dallad la doonayo in laga helo warshad, laamaha ayaa gaaban yahay dhererka iyo ballaca.
Geedka geedka irgaha ee la gooyo guga ka hor inta aan bararka kelyaha ama dayrta, marka caleemaha dhaco.
Sida loo dardargeliyo irgu si sax ah
Waxaa jira dhowr siyaabood oo ah shadberry taranta:
kala qaybinta baadiyaha.
Ubaxyada ka soo baxa abuurka si fiican u dhaqso iyo dhaqso. Waa suurtogal in dacaayad ku dhirta irgi by qaybo caleemaha xididka kaliya ee warshad la sameeyey, laakiin ma jiro macnaheedu. Si aad u hesho foomka saxda ah, gooynta qashinka ah. Neefsashada Irgi lowsku waa habka ugu wanaagsan ee loogu talogalay inuu bannaanka u soo jeeda. Maaddada dhirta ugu fiican iyo kuwa fudud waxay yihiin geedo saddex sano ah oo leh nidaam xidideysan oo buuxa.
Beerta khibrad leh waxay jeceshahay inay koraan irga adoo goynaya, maadaama ay taasi u baahan tahay aqoon iyo khibrad gaar ah. Gooyn ka soo koritaanka sanadka ee la soo dhaafay ayaa la gooyaa dayrta, ka dibna lagu kaydiyaa beeritaanka ilaa guga, qoday ciid ama dhulka. Isticmaal rootstock waxay isticmaalaan laba sano oo isku xigta. Marka baraaruga guga soo baxo, gooyn ayaa la qoday, xididdada waa la dhaqay waxaana la jarjarey dhoobo: kore kelyaha iyo hoosta. Dhamaadka hoose ee shadberry seedling ah waa mid fiiqan oo loo geliyo saamiyada. Meeshan ayaa si adag loogu duubaa caag. Ka dib markii la gooyey, dhirta waxaa la dhigayaa aqalka dhirta lagu koriyo ilaa ay ka koraan. Buundooyinka caanaha ah waxay u adeegi karaan sida alaabada iyo tufaaxa. Warshadani waxay ku wareejisaa horraanta ubaxyada iyo caabbinta barafowga geedaha miraha.
Bishii Juun ama Luulyo, gooynta ayaa laga jaray dushooda caleemaha shan sano jir ah. In dhererka, waa in aysan aheyn wax ka badan 15 cm. Mid kasta oo jirida, ka saar caleemaha hoose, ka tago qaar ka mid ah sare. Qaybaha hoose ee qaybaha hoose waxaa la dhigaa 12 saacadood oo ah wakiilka xididka, ka dibna xididada waxaa lagu dhaqaa biyo saafi ah. Ka dib markaa, waxaad ku beeran kartaa irgu carrada nadiif ah ee lagu koriyo qabow. Waxay ku sameeyaan isqorid iyo fogaan ah 4 cm.Ka soo korodhka sare ee ciidda waxaa lagu daboolay lakabka ah 10 cm qaro weyn, sida ugu fiican, gooyntu waa inay ahaataa 20 cm ka hooseysa saqafka aqalka dhirta lagu koriyo.
Gooba geedka, iyaga ku shub si biyaha loo buufiyo. Heerkulka gudaha aqalka dhirta lagu koriyo waa inuusan ka badan 25 ° C. Si arrintan loo sameeyo, waxaa lagama maarmaan ah waqti ka waqti si looga saaro dusha sare ee dhirta lagu koriyo iyo guluubka hawada. Daawo ciidda - waa inay qoyaan. Ka dib markii gooynta qaadan xidid, waxaad u baahan tahay inaad ka saarto qajooga ah ee aqalka dhirta lagu koriyo inta lagu jiro maalinta, iyo ka dib markii ay sii xoogaystaan, waa in aadan gelin qoorta xataa habeenkii.
Saddex usbuuc ka dib, gooyntu waxay horumarin doonaan nidaam xidid adag, waxayna diyaar u noqonayaan inay u guuraan sariir ku meel gaar ah. Halkan waxay u baahan yihiin in la bacrimiyo iyada oo digada lagu qasi jiray biyaha ee cabirku yahay 1: 8, amooniyam amooniyam lagu kala diro biyo baaldi. Daryeelidda gooyntu maaha wax ka duwan daryeesha qaan-gaar ah, iyo dayrta soo socota waxaa lagu beddelaa deegaan joogto ah.
Wixii habkan daabacaadda ku habboon caleemaha hal sano ah ama laamiyo labadii sanno ee leh koritaan xoog leh. Kala tag guga, sida ugu dhakhsaha badan qorraxdu waxay u kululaanaysaa carrada yar. Lakabka ugu sarreeya ee duurka, kuwaas oo la qaadi doonaa isbedel, waxaad u baahan tahay inaad qodo, ku shub bacriminta iyo heerka. Taas ka dib, abuur caleemo iyo caleemo qallalan oo kor u kaca jeexjeexyada. Daboolka ayaa u baahan in la xoqo. Marka caleemaha koraan caleemaha 12 cm ee dhererka, waa inay ahaadaan kala badh daboolay humus. Marka caleemaha koraan 15 cm kale, hababka waa in lagu celiyo. Qulqulaha xididada loo qaaday ayaa lagu beeray dayrta soo socota meel joogto ah.
Koraaya miraha shadberry
Tani waa ugu fiican, laakiin waqti isku mid ah habka ugu dheer ee ay u koraan irgi. Seeds waa la iibsan karaa ama madaxbanaan ayaa laga soo qaadan karaa miraha bisil. Ma aha kuwo qalalan, oo aan lagu qasin ciid, oo lagu keydiyo meel qabow ah (dhulka hoostiisa, qaboojiyaha) ka hor intaadan beeran.. Haddii miraha horay loo diyaariyey, way sii kori doonaan. Ku rid inta u dhexeysa suufka suufka lagu qooyey hydrogen peroxide iyo isku duub wax kasta oo caag ah. Ku hay xaaladdan 4 bilood.
Guga, miraha waxaa lagu beeray aqalka dhirta yaryar ee masaafada 20 cm. Caleemaha ayaa la arki doonaa laba ama saddex toddobaad. Waxaad abuuri kartaa abuurka sariiraha si gaar ah loo diyaariyey xilliga dayrta. Tani waxay noqon doontaa mid sii kordhaysa irgi ee bannaanka u furan. Seeds ayaa kori doona guga.